I-Periodontitis, iyini futhi ungayivimba kanjani? Bezzia
I-Periodontitis, iyini futhi ungayivimba kanjani?
UPau Heidemeyer | 07/05/2021 14:00 | Izifo, Ezempilo
Abantu abaningi bazizwa besaba lapho beya kudokotela wamazinyo, akumangazi ngoba lapho umuntu eya lapho bavame ukuzwa ubuhlungu, ukungaphatheki kahle futhi basesimweni esithile esingathandeki. Noma kunjalo, kubaluleke kakhulu ukuya kudokotela wamazinyo okungenani kanye ngonyaka ukuze ikwazi ukucacisa noma iyiphi inkinga, yenze ukutholwa kusenesikhathi futhi ikwazi ukuyelapha ngokushesha okukhulu.
Kulokhu, sifuna ukukutshela nge- i-periodontitis, isifo esivame kakhulu esithinta indawo yezinsini, izicubu ezithambile, imisipha namathambo asekela amazinyo. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngale ndaba, futhi unempilo engcono yomlomo, ungayeki ukufunda.
La i-periodonditis Kuyinto a izifo ezithathelwanayo nezivuvukalayo okuhambisana nezinsini ezithinta izicubu ezithambile, imisipha namathambo asekela amazinyo. Kwesinye isikhathi i-periodontitis ingaba nolaka kakhulu futhi idale izinyo, yize lokho kungenzeka kwenzeke kunezici ezithile, ezihlobene nokuqongelela kwe-tartar ebusweni bamazinyo.
Lapho isicubu samathambo esizungeze amazinyo singakathinteki, sikhiqiza kuphela ukuvuvukala okungaphezulu kwezinsini, lokhu kwaziwa njenge-gingivitis, kuyisigaba sokuqala se-periodontitis. Uma ingalungiswa, ingaba yimbi kakhulu futhi ithinte amazinyo.
Kunconywa ukubona izimpawu zokuqala, njengokubomvu nokuphuma kwezinsini, okungenzeka kubangelwe ukuxubha noma ukungenzi lutho. Njengamanje kukhona ukwelashwa okuvumela ukuthi lokhu kugcinwe kungasebenzi futhi kungaholeli kokubi kakhulu, njengokuhlanzwa kwenhlanzeko yomlomo minyaka yonke noma kabili ngonyaka, nokulandela imiyalo eyisisekelo yenhlanzeko yomlomo, kuvame ukwanela ukulawula lesi sifo.
Lapho i-gingivitis ingalawulwa futhi kungathathwa sinyathelo, lesi sifo singashintsha sibe yi-periodontitis, lapho ukulahleka kwezicubu zethambo nokuxhaswa kwamazinyo sekuvele kubonakala.
1 Yini i-periodontitis?
2 Ixilongwa kanjani i-periodontitis?
3 Lezi yizimpawu ze-periodontitis
4 Ukwelashwa okungcono kakhulu kwe-periodontitis
4.1 Imithi engeyona yokuhlinzwa:
4.2 Ukwelashwa kokuhlinzwa:
5 Vimbela i-periodontitis ngempumelelo
Kuyaziwa nangokuthi isifo sezinsini. Kuyisifo esibi kakhulu sezinsini esilimaza izicubu ezithambile, okuthi uma zingalungiswa, zingabhubhisa ithambo elisekela amazinyo. Lokhu kungadala ukuthi amazinyo akhululeke noma alahleke.
Kuyisifo esivame kakhulu futhi inzuzo esinayo ukuthi singavinjelwa kakhulu. Imvamisa kungumphumela wokuhlanzeka komlomo. Ukuxubha kabili ngosuku, ukuqhuma nsuku zonke, nokuhlolwa njalo amazinyo kungakunciphisa kakhulu ukuqala kwalesi sifo.
Ngokuya ngezinga lokuthinteka, sibheka amazinga amaningana:
Ixilongwa kanjani i-periodontitis?
Uma kukhona ukungaphatheki kahle ezinsinini, njengokuphuma kwegazi, ubuhlungu noma ukusola ukuthi ungahle ube ne-gingivitis noma i-periodontitis, okufanele ukwenze ukuya kuchwepheshe wamazinyo.
AYebo, ungathatha umlando womtholampilo wesimo sakho somlomo, izokwenza izifundo ezithile ezixhumanisa i-periodontitis nezinkinga zenhliziyo, isifo sikashukela noma ukuzalwa ngaphambi kwesikhathi.
Hlola umlomo wakho nge-tartar buildup futhi uhlole ukuthi kukhona yini ukopha ezinsinini nakwezinye izimpawu.
Uma kunesidingo, ama-x-ray wamazinyo azokwenziwa ukubheka ukuthi isisindo samathambo esisekela amazinyo silahlekile.
Lezi yizimpawu ze-periodontitis
Izimpawu zokuqala ze i-periodontitis Lezo okufanele sizibheke yilezi:
Izinsini zibomvu futhi ziyavuvukala.
Ukuhoxa of the izinsini.
Yiba ubomvu ezinsinini.
Ukuphefumula kabi, halitosis.
Ukuhamba okuthile emazinyweni.
Ukwelashwa okungcono kakhulu kwe-periodontitis
Uchwepheshe nguyena okufanele enze ukwelashwa ukuvimbela i-periodontitis ekuqhubekeni ngokuqhubekayo. Udokotela wamazinyo, uma esehlolisise isimo, uzoqhubeka nokwenza ukwelashwa okuyisisekelo ngokusebenzisa ukususa imali enqwabelene esikalini nokwenza ukuhlanza ngokuphelele, ngaphansi kwezinsini nxazonke zamazinyo.
Ukuze lokhu kungakhuli futhi kube kubi kakhulu, kufanele kwenziwe ukuvimbela okubalulekile, lapho inhlanzeko ethe xaxa kumele ihlanzwe futhi kugwenywe ukusetshenziswa kukagwayi.
Imithi engeyona yokuhlinzwa:
Ukukala nokuhlela izimpande: Kuyinqubo lapho uqwembe lwegciwane kanye ne-tartar kuqoqene ebusweni bamazinyo kufanele kususwe.
Ukwelashwa kwemithi: lapha icala ngalinye lihlolwe ngokusho kwesimo se-periodontal kanye nempilo ejwayelekile yesiguli ngasinye. Kusetshenziswa ama-mouthwashes, kwesinye isikhathi ama-antibiotics asiza ukulawula ukutheleleka kwamagciwane.
Ngakolunye uhlangothi, kunezinye izinhlobo zokuhlinzwa okwenziwa ngezikhathi ezithile ezivumela ukwelapha le periodontitis.
Ukwelashwa kwezinsini zomnotho.
Ukuhlinzwa kwamathambo ngezikhathi ezithile.
Ubuciko de izicubu ezithambile.
Ubuciko be ithambo elilukiwe.
Vimbela i-periodontitis ngempumelelo
Imithi yokwelashwa ngezikhathi ezithile kufanele ibe ngeyodwana futhi idinge ukulandelwa okuthile komuntu ngamunye, ngoba kufanele iguqulelwe esimweni ngasinye ngokuya ngohlobo lwesiguli. Ukuvakashelwa njalo kokulungiswa kubalulekile ukuhlola inqubekelaphambili yokwelashwa futhi ekugcineni, kuqedwe ukufakwa okusha kwe-tartar kanye ne-plaque ye-bacterial.
Ukuhlolwa njalo nokuhlanzwa kufanele kube yindlela yokuvimbela i-periodontitis ekubeni khona empilweni yakho, ngakho-ke kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Vakashela udokotela wamazinyo wakho njalo, noma nini lapho ekutshela khona, okungenani kanye ngonyaka.
Ibhulashi amazinyo njalo emva kokudla.
Sebenzisa ukugeza umlomo.
Ungayeki ukusebenzisa i- iflash yamazinyo okungenani kanye ngosuku.
Ushintsho lwe xubha njalo ezinyangeni ezintathu.
Gwema ukubhema futhi ulinganise ukusetshenziswa kwe- utshwala
Lesi sifo se-periodontal sivela lapho izicubu ezisekela amazinyo zivutha ngenxa yesethi yamagciwane akhona. Ukuyivimbela, uqweqwe lwebhaktheriya oluqongelela phakathi kwamazinyo nezinsini kufanele lususwe, yingakho ukuxubha nsuku zonke kubaluleke kangaka, njengokusebenzisa i-dental floss kanye nebhulashi eliphakathi.
Kuhle ukusebenzisa amabhulashi athambile ukuze ungalimazi izinsini, Shintsha amakhanda njalo ezinyangeni ezintathu njengoba umphumela wamabhulashi we-brush ulahlekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » I-Periodontitis, iyini futhi ungayivimba kanjani?
Izinhlobo zangaphansi zangaphandle zompheme noma ithala lakho
Konke odinga ukukwazi ngokuvikelwa yilanga